DOWNLOAD WINDOWS REPAIR FREE ON COMPUTER - MMEMME NYOCHA - 2019
Mmezi Windows 4.0.17
Mgbidi Windows bụ mmemme nke edoziri iji dozie ọtụtụ nsogbu ndị a maara na sistemụ arụmọrụ Windows - njehie ndekọ nke faịlụ faịlụ, nsogbu na Internet Explorer na firewall, na mberede mgbe ị na-etinye mmelite.
Tupu ịmalite mgbake usoro, usoro ihe a na-atụ aro ime ntọala izugbe na-eme ka o nwekwuo ihe ịga nke ọma na mgbake. Tụkwasị na nke ahụ, omume ndị a nwere ike ịbụ iji dozie nsogbu gị.
N'ozuzu, a na-atụ aro ka ọ rụọ ọrụ 4:
Tọgharia ntọala atụmatụ ike.
Ịdekọ isiokwu, ịchọpụta mmebi na faịlụ melite ma ọ bụ enweghị ya, yana ịchọpụta ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpata ọdịda n'oge mgbake.
Lelee usoro faịlụ maka njehie.
Ịtụle faịlụ faịlụ tinyere ọrụ SFC wuru n'ime Windows.
Ọrụ a, dị ka ndị mmepe ahụ, nke bụ ọkwa ọzọ, nwere ike iji mee ihe dị ka ntụpọ dị iche. Nke a bụ ihe ndabere ederede na ndekọ ikikere faịlụ, nhazi usoro usoro.
Iji weghachite njikwa usoro, ị nwere ike iji ndenye ederede a kwadebere iji wepụ ngwa ọjọọ, ịlele faịlụ mmemme na ikike nnweta, melite mmelite, ma họrọ "disinfection" nke OS.
Na window window, a na-enye onye ọrụ ohere ịhọrọ ọnụọgụ nyocha.
Weghachite ehichapụ faịlụ
Site na Windows Repair ị nwere ike ịnwa igbake faịlụ ehichapụrụ na-ahapụ ya na disk. Usoro ihe omume ahụ ga-iṅomi niile nchekwa aha. "Meri igwe" ma weghachite akwukwo ma o kwere.
Ihe di elu
Ọrụ ndị a dị naanị na nsụgharị nke usoro ihe omume ahụ. Ntuzi njehie a maka ọrụ nke Windows Firewall, iwepụ nke mmelite oge ochie site na ndekọ, nloghachi nke faịlụ zoro ezo site na nje, mweghachi nke ọdụ ụgbọ mmiri maka onye nbipute.
Ngwaọrụ ndị a na-arụ ọrụ nanị na mbipụta Pro. Nke a bụ nchịkọta ederede ndị ọrụ, ọrụ nke nhichapụ nke diski usoro, modul maka ijikwa otu ọrụ, ntọala nke ọma nke OS na ọrụ nlekọta. Usoro ihe omume ahụ na-enyekwa gị ohere ịme ụfọdụ ngwa maka nnọkọ akaụntụ ahụ ma gbakwunye ọrụ TrustedInstaller na ndepụta nke ndị ọrụ kwere ekwe.
Ndozi Windows na-echekwa akụkọ ihe mere eme niile nyocha na usoro ndị ọzọ na faịlụ ederede na nchekwa nchekwa.
Ọrụ dị ukwuu iji weghachi usoro ahụ;
Ikike idozi njehie na ogbo nke nhazi;
Weghachite ehichapụ faịlụ;
E nwere otu nsụgharị dị mfe;
Nwepụta mbipụta bụ isi.
Ngwa ndị ọzọ dị naanị na mmemme a na-akwụ ụgwọ nke usoro ihe omume ahụ;
Enweghị nsụgharị n'asụsụ Russian.
Ndozi Windows bụ nhazi usoro ihe arụ ọrụ na ngwaọrụ mgbake faịlụ maka ndị ọrụ dị elu. Ọnụnọ nke nsụgharị akwụ ụgwọ bụ ihe ọzọ karịa nkwụsị, ebe ọ bụ na ụfọdụ ọrụ nke usoro ihe omume ahụ chọrọ nghọta zuru ezu banyere usoro ndị na-eme na usoro.
Download Ndozi Ndozi Windows
Rụgharia edezi RS Njehie Mmezi Nsogbu nke "Nwepu Ndozi Nlekọta" njehie mgbe ị na-agbanye Windows 7 Ndabere nchekwa Windows
Ndozi Windows bụ ngwanrọ e mere maka "disinfecting" nke Windows OS ma ọ bụrụ na usoro faịlụ, mmebi ndekọ na ntọala ntọala.
Onye Mmepụta: Tweaking.com
Ọnụ: $ 25